सेलिब्रेटीका दसैँ योजना « Name of Truth News : News Portal in Nepal
सेलिब्रेटीका दसैँ योजना
प्रकाशित मिति : २०७८, आश्विन, २९, शुक्रबार ०९:३०
बडा दसैँ नेपालीको घर आँगनमा प्रवेश गरिसकेको छ । अघिल्लाका बर्ष झै यसपालि पनि कोरोना संक्रमणको त्रास कायमै रहेकाले स्थिति त्यत्ति सहज भइसकेको छैन । यद्यपि, परम्परालाई निरन्तरता दिँदै चाडपर्व भने सबैले मनाउने गरेका छन् । चाडबाड मनाउन सर्वसाधारणले झै सेलिब्रेटीले विशेष योजना बनाउँने गरेका छन् । सेलिब्रेटीहरूलाई यसवर्षको दसैँलाई कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ भनेर न्युज कारखानाका लक्ष्मण सुवेदीले प्रश्न गरेका छन् । हेरौं उनीहरूको जवाफ
बल्ल दसैँ आए जस्तो लागेको छ : भुवन केसी
गत बर्ष कोरोनाका कारण जारी लकडाउनले निकै सकसका साथ दसैँ मनाउनु परेको थियो । तर यसपालि भने लकडाउन छैन, स्थिति अलि सहज छ । तर, सावधानी भने अपनाउनै पर्छ । म सर्वसाधारणले झै समान्य तवरले दसैँ मनाउँछु । बुबाआमा, मान्यवरको हातबाट टीका लगाएर आशीर्वाद लिने, आफन्त, आफूभन्दा सानालाई टीका लगाइदिने ।
यो दसैँमा फूलपातीको दिनबाट मेरो बिशेष भूमिका रहेको सिनेमा ‘डाडाको वरपीपल’ प्रदर्शनमा आएको छ । कोरोनाका कारण ठप्प रहेको सिनेमा क्षेत्र चलायमान बनाउन फिल्म प्रदर्शन हुन जरुरी छ । सोभित बस्नेत भाईले निरन्तर रुपमा फिल्म निर्माण गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् । मलाई बल्ल यसपालि दसैँ आएझैं महशुस भएको छ । सबैको फिल्म चलोस्, दुर्गा भवानीले आशीर्वाद दिउन्, सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीमा बडा दसैँको हार्दिक शुभकामना ।
पिङ चाहिँ खेल्नु पर्ला : रेखा थापा
यसपालि अघिल्लो बर्षभन्दा माहोल अलि रमाइलो छ । तर हामीले सावधानी चाहिँ अपनाउनै पर्छ । कोरोनाले गर्दा गतबर्ष त दसैँ साहै्र खल्लो भयो । यसपालि भने सबैतिर अलि सहज वातावरण छ । त्यसैले दसँैको रौनक अलि बढेको पाएकी छु । म यसपालि काठमाडौंमै दसैँ मनाउँछु । मम्मीको हातबाट टीका लगाउँछु । सामाजिक दुरी कायम राख्दै आफन्तको हातबाट टीका लगाइ आशीर्वाद लिन्छु । यो दसैँमा स्पेसल त्यस्तो केही प्लान छैन । हलमा फिल्म प्रदर्शन हुन थालेको देख्दा खुशी लागेको छ । घर नजिकै सिफल चौरमा पिङ हालेका छन् । टीकाको दिन भुइँ छोड्नु पर्छ रे, त्यहाँसम्म पुगेर पिङ चाहिँ खेल्नु पर्ला ।
दसैँ छैन, पोखरा घुम्न जाने प्लान छ : दीपकराज गिरी
ठूली आमाको स्वर्गारोहणका कारण यसपालि दसैँ छैन । तर पनि दसैँ आउँदा मलाई अर्कै रौनक लागेको छ । कोरोनाका कारण अहिले पनि सबैमा त्रास छ । एकदम सुरक्षित भएर चाडपर्व मनाउनु पर्ने छ । बजारमा देखिएको भिडभाडले साँच्चै नै दसैँ आएको महशुस गराएको छ । तर यसले संक्रमण बढ्ने हो की भन्ने डर छ । यसपालि टीका नभएकाले दसैँमा कतै घुम्न जाने की भन्ने सोचमा छु । बिदेश घुम्न जानलाई पिसिआर टेस्ट, के के चाहिन्छ, त्यतिन्जेल त आफ्नै देशको जुनसुकै स्थानमा पुगिन्छ । पोखरा जाने की भन्ने सोचेको छु । दसैँ नभए ता पनि नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीमा दसैँ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
जुठो परेकाले दसैँ छैन : पूजा शर्मा
जुठो परेकाले मेरो यसपालि दसैँ छैन । मलाई खासमा दसैँ भन्दा तिहार मनपर्छ । झण्डै दुई बर्षयता कोरोनाका कारण सबैलाई घरमा थन्क्याइ रहेको थियो । अब भने स्थिति सामान्य बन्दै गइरहेको छ । फिल्म पनि रिलिज हुन लागेको छ । त्यसैले यसपालि धेरै खुशी लागेको छ । टीका लगाउन नहुने भए पनि दसैँले आफ्न्त, आफ्ना मान्छे भेटघाट, कुराकानी गर्ने अवसर जुटाइदिन्छ । त्यो नै खुशीको कुरा हो । म सम्पूर्ण नेपालीमा दसैँको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
सर्तक भएर मनाउनुपर्छ–जीतु नेपाल
दसैँकै लागि भनेर खासै कुनै योजना बनाएको छैन । विगतका दुई बर्षका दसैँ कोरोनाको भयले खल्लो बनायो । यसपालि भने अलि खुल्न पाइएको छ । तर सर्तक भने हुनैपर्छ । घरपरिवार, आफन्तसँग टीकाजमरा लगाएर, ठूलाबाट आशीर्वाद लिएर, सानालाई आशीर्वाद दिएर दसैं मनाइन्छ । सुसुराली जाने, खाइपीइ गर्ने, पिङ खेल्ने योजना छ ।
यसपालिको दसैँ नयाँ मान्छेसँग–प्रियंका कार्की
यसपालिको दसैँ मेरा लागि बिशेष छ । भर्खरै घरमा नयाँ मान्छे (छोरी) को आगमन भएको छ । हरेक दिन दसैँ जस्तो फिल भइरहेको छ । बितेका दुई बर्षभन्दा यसपालि वातावरण अलि खुला छ । तर पनि सुरक्षित तवरले दसैँ मनाउनु पर्छ । म पहिलाका बर्षहरूमा झँै सामान्य तवरले परम्परा निभाएर दसैँ मनाउँछु । यसपालि छुट्टै केही प्लान बनाएकी छैन । सानोमा दसैँ भन्ने बित्तिकै नयाँ कपडा, टीका लगाएर पाइने दक्षिणको लोभ लाग्थ्यो । अहिले भने अझ प्रगति होेस् भन्ने मान्यजनको आशीर्वाद प्यारो लाग्छ ।
परिवार भेटघाट, खाइपीइ गरिन्छ –आश्मा गिरी
पछिल्ला दुई वर्षको दसैँ खुलेर मनाउन पाइएन । यसपालि पनि पूर्ण रुपले त्रासविहीन चाहिँ हुन सकिएका छैन । तर पनि लकडाउन नभएकाले स्थिति सामान्य बन्दै गइरहेको छ । त्यसैले यसपालि आफन्तहरूकोमा गएर टीका लगाइ दसैँ मनाउन पाइने भएको छ । दसैँ मलाई मन पर्ने पर्व हो । बाबा मम्मी, हजुरबुबा, हजुरआमाको हातबाट टीका लगाइ आशीर्वाद लिने, परिवारका सबै सदस्य जम्मा हुने, खानपीन, नाचगान गर्ने, हल्का तास पनि खेल्ने गरिन्छ ।
दर्शकसँग दसैँ मनाउँछु –सलोन बस्नेत
मलाई दसैँ मन पर्छ । दसैँ आउँदैछ भन्ने बित्तिकै कताकता रमाइलो लाग्छ । यसपालि त फूलपातीको दिनदेखि हाम्रो फिल्म ‘डाडाँको बरपीपल’ रिलिज भएको छ । त्यसैले यो दसैँ दर्शकमाँझ मनाउने योजना छ । कोरोनाका कारण यत्तिका समय हल बन्द थिए । ‘डाँडाको बरपीपल’ बाट फिल्म प्रदर्शन सुुरु भएको छ । दसँैको यो माहोलमा फिल्मप्रेमी सबैलाई हलमै गएर फिल्म हेरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।
घर, माइती दुवैतिर पुगिन्छ–टीका प्रसाईं, गायिका
गत बर्ष कोरोना महामारीले गर्दा चाडपर्वमा समेत हिड्डुल गर्न सकस भयो । यसपालि भने स्थिति समान्य बन्दै गएको छ । त्यसैले यो दसैँ सिन्धुली र झापा पुगेर मनाउने योजनामा छु । घर र माइती, दुवैतिर पुगिन्छ । अब माहोल समान्य बन्दै गइरहेको छ तर पनि भीडभाडदेखि बचेर दसैं मनाउनु हुन म सबै जनामा आग्रह गर्छु । मेरो सम्पूर्ण शुभचिन्तकलाई बडा दसैँको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
बाढी र पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ३० पुग्यो, स्वास्थ्यकर्मीसहित चार जना अझै वेपत्ता
सभापतिले महाधवेशन गर्न छाडेर जथाभावी बोल्दै हिँडे : वरिष्ठ नेता पौडेल
देख्नु’भो त एमालेमा १० बुदेँ भन्ने साथीहरुको बिजोग : माधव नेपाल
थप ५ सय १३ जनामा कोभिड संक्रमण, ८ जनाको मृत्यु
प्रकाशित मिति : २०७८, कार्तिक, ६, शनिबार २०:४३
नेपाली कांग्रेसले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय जनकपुरका प्रमुख राजेश कुशवाहामाथि दुव्र्यवहार गर्ने दोषीलाई कानुनी कारवाही गर्न सरकारले अघि बढाएको प्रक्रियाको स्वागत गरेको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज एक विज्ञप्तिमार्फत राजनीति, प्रशासन तथा समग्र समाजमा रहेका बेथितिविरुद्ध प्रश्न उठाउनु र स्वच्छ समाजको खोजी गर्नु सबैको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै कानुन हातमा लिने, बलजफती र हुल हुज्जत गर्ने कार्य भने सभ्य समाजको परिचायक हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
यस्तो घटना आपत्तिजनक र निन्दनीयसँगै कडा कारवाहीको विषय बन्ने जनाउँदै उहाँले जनकपुरको घटनाले नेपाली इञ्जिनीयर, कर्मचारी र सभ्य समाजमा विश्वास गर्ने सबैलाई मर्माहत बनाएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
कांग्रेसले सहकर्मीउपर गम्भीर दुव्र्यवहार हुँदा इञ्जिनीयर आक्रोशित र आन्दोलित हुनु स्वभाविक भएको जनाउँदै सुरु कानुनी कारवाहीसँगै राज्यको सक्रियताले यसलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास लिएको छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सहभागी हुने उद्घोष गरेका हरेक दल र संस्थाले आफ्ना समर्थक तथा सदस्यलाई तदनुकूलको संस्कार र व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नु सम्बन्धित दल नेतृत्वको कर्तव्य हुने कांग्रेसले स्मरण गराएको छ ।
हुलहुज्जतको बाटोबाट समुन्नत समाजमा पुग्न नसकिने उल्लेख गर्दै कांग्रेसले हरेक दल, नेतृत्व, सदस्य, समर्थक र नागरिकले यसलाई गहिरो आत्मसात् गर्नुपर्ने आवश्यकताका साथ थप सजगता तथा कडाइका लागि सरकारसँग अपिल गरेको छ ।
प्रकाशित मिति : २०७८, कार्तिक, ६, शनिबार २०:१७
पाँचथर- यहाँ बाढी र पहिराका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३० पुगेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार बाढी र पहिरामा परी बेपत्ता रहेका थप दुई जनाको शव आज फेला परेसँगै मृतकको सङ्ख्या ३० पुगेको हो ।
यही कात्तिक १ देखि ३ गतेसम्म निरन्तर भएको वर्षाका कारण बाढी र पहिराको प्रकोप हुँदा जिल्लाका चार स्थानीय तहका सो सङ्ख्यामा स्थानीयवासीको ज्यान गएको हो । बाढीले बगाएर बेपत्ता फिदिम नगरपालिका–६ की २२ वर्षीया सम्पदा आले मगर र पहिराले पुरिएर बेपत्ता फाल्गुनन्द गाउँपालिका–४ चिलिङदिनका आठ वर्षीय बालक मिक्तोक चेम्जोङको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
बाढी र पहिरामा परी मृत्यु भएका २८ जनाको यसअघि नै पहिचान भइसकेको छ । त्यसमध्ये २१ जना मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका छन् । जिल्लामा अझै फिदिमका एक र मिक्लाजुङका तीन गरी चार जना बाढी तथा पहिरामा परी बेपत्ता छन् । बेपत्ता हुनेमा दुई स्वास्थ्यकर्मीसमेत छन् । इलामको माङ्सेबुङ गाउँपालिकामा कार्यरत उनीहरु पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा पहिरामा परी घाइते भएका स्थानीयवासीको उपचारमा आएका थिए । पहिरो झरेपछि भाग्ने क्रममा पहिराले पुर्दा बेपत्ता भएका उनीहरु अझैसम्म फेला पर्न नसकेको मिक्लाजुङका अध्यक्ष अमरराज माखिमले जानकारी दिनुभयो ।
बाढी र पहिरामा परी बेपत्ताको खोजी तीव्र पार्न तथा क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकेको छ । सुरक्षा निकायले स्थानीयवासीसमेतको सहयोगमा खोजी कार्य गर्दै आएको तथा स्थानीय तहबाट क्षतिको विवरण सङ्कलन थालिएको समितिले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति : २०७८, कार्तिक, ६, शनिबार १८:५६
काठमाडौँ : कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन समितिको मात्रै नभएर केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय नेतृत्वले लिनुपर्ने बताएका छन् । सुदूरपश्चिम भ्रमणमा रहँदा शुक्रबार धनगढीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी महाधिवेशन कहिले हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा ‘त्यसबारे निर्वाचन समितिले निर्णय गर्ने’ बताएका थिए । पौडेलले शनिबार कञ्चनपुर पुगेर महाधिवेशन गर्ने जिम्मा निर्वाचन समितिको मात्रै नभएको बताएका हुन् ।
उनले नेतृत्वले महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेर जथाभावी बोल्दै हिँडेको भन्दै आलोचना गरे । ‘पार्टीको महाधिवेशन गर्ने काम निर्वाचन समितिलाई मात्रै जिम्मा दिएर हुँदैन । केन्द्रीय नेतृत्वले जिम्मा लिनुपर्छ । महाधिवेशन गर्ने जिम्मा केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय नेतृत्वको हो । आमनिर्वाचन भन्दा पहिल्यै हाम्रो पार्टीको अधिवेशन हुन्छ,’ पौडेलले भनेका छन् ।
उनले आमनिर्वाचन भन्दा पहिल्यै पार्टीको महाधिवेशन हुने भएकाले अहिलेदेखि नै टिकट बाँड्दै नहिँड्न आग्रह गरेका छन् । ‘पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ, निर्वाचन हुन्छ, नयाँ पदाधिकारी आउँछन् । यहाँ को-को हो ? अहिल्यै टिकट बाँड्दै हिँडिरहेका छन् अरे,’ पौडेलले अघि भने, ‘टिकट बाँड्न अरु नै आउँछन् । जुनियरहरु आउँछन् ।’
उनले संविधानमाथि आक्रमण गर्दा केपी ओलीलाई बालुवाटारबाट निकालेर बालकोट पुर्‍याइएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराए । ‘संविधानमाथि आक्रमण गर्दा केपी ओलीलाई बालुवाटारबाट निकालेर बालकोट पुर्‍याइसकिएको छ । अनि हामीले त्यही संविधान नमान्दा हाम्रो के हालत हुन्छ ? कि हामीलाई कानुन नलाग्ने हो ? संविधानको व्यवस्थाबमोजिम पार्टीको महाधिवेशन यथाशीघ्र गर्नुपर्नेतर्फ संकेत गर्दै पौडेलले प्रश्न गरे ।उनले कांग्रेसलाई संकटबाट मुक्त गराउन र लोकतन्त्रलाई संकटबाट पार लगाउन सबै नेता कार्यकर्तालाई एकताबद्ध भएर, उच्च मनोवलका साथ अघि बढ्न आग्रह गरे ।